ကြီးမားသောပင်စည်သားရေလက်ကိုင်အိတ်များ - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်မဆောင်ပါ WoopShop®
$21.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $54.99
အရောင် Black က ပြာသော ကော်ဖီ ပန်းရောင် ညိုသော Burgundy မီးခိုးရောင် အဖြူအမဲ စိမ်းလန်းသော ကော်ဖီဖြူ အဖြူရောင်အညိုရောင် အနီရောင်အဖြူ အစိမ်းရောင်အဖြူရောင်
ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / Black က တရုတ် / Black က ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / အပြာရောင် တရုတ် / အပြာရောင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / ကော်ဖီ တရုတ် / ကော်ဖီ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / ပန်းရောင် တရုတ် / ပန်းရောင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / အညိုရောင် တရုတ် / အညိုရောင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၊ တရုတ် / Burgundy ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / မီးခိုးရောင် တရုတ် / မီးခိုးရောင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / အဖြူရောင်အနက်ရောင် တရုတ် / အဖြူရောင်အနက်ရောင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / အစိမ်းရောင် တရုတ် / အစိမ်းရောင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / ကော်ဖီဖြူ တရုတ် / ကော်ဖီဖြူ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / အဖြူရောင်အညို တရုတ် / အဖြူရောင်အညို ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / အနီဖြူ တရုတ် / အဖြူရောင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / အဖြူအစိမ်း တရုတ် / အစိမ်းရောင်အဖြူရောင်
ကြီးမားသောပင်စည်သားရေလက်ကိုင်အိတ် - ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း / အနက်ရောင် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
အိတ်အမျိုးအစားများ: လက်ကိုင်အိတ်များနှင့် Crossbody အိတ်များ
ပြည်ထဲရေး: ဆဲလ်ဖုန်းအိတ်ကပ်,ပြည်ထဲရေးဇစ် Pocket
pattern အမျိုးအစား: အပ်ချည်
လက်ကိုင်အိတ်များအတွင်းပိုင်း: ဆဲလ်ဖုန်းအိတ်ကပ်အတွင်းပိုင်းဇစ်အိတ်ကပ်, ဥရောပနှင့်အမေရိကန်စတိုင်လက်ကိုင်အိတ်
လက်ကိုင်အိတ် Hardness: Sအဖန်ဖန်
အိတ်ကစူပါပါ ငါဖမ်းမိတယ် 2. Shvi Rivny အနံ့မရှိ
တစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်5တစ်ခုလုံးကိုသန္နိm္ဌာန်ချ m သင့် m သည် Bolse သန္တာကျောက်တန်းစူပါမားကက်သမင်ဒုံးကျည်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးသည်စင်ကြယ်သောဘိုလ်ဆာက de plástico con una bolsa အသားအရောင်ခွဲခြားမှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အဖြစ်အပျက်များကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ပလက်ဖောင်းနှင့် es esacular စပိန်နိုင်ငံ အရောင်အသွေးစုံစုံလင်လင်အရောင်အသွေးစုံစုံလင်လင်အရောင်အသွေးစုံစုံလင်လင်အရောင်အသွေးစုံလင်စွာဖြင့်အရောင်အသွေးစုံလင်စွာဖြင့်အရောင်အသွေးစုံလင်စွာဖြင့်အရောင်အသွေးစုံလင်စွာဖြင့်အရောင်းအ ၀ ယ်ပြုလုပ်နိုင်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ် ဦး တည်းသောသန္တာကျောက်တန်းအဖြစ်သန္ဓေတည် monedero ကြီးမားသောစသည်တို့ကိုဤမျှလောက်သောအဝတ်အစားများနှင့်ကစင်ကြယ်သောစင်ကြယ်သော el bolso ya sería la caña perso eso se puede poner por muy poco တစ်ကိုယ်တော် decir que lo recomiendo 100 x100 estoy encantada gracias vendedor ဂုဏ်ပြုလွှာ
Super torebka, bardzo dobrze wykonana, jedyne do czego możnabyłobysięprzyczepić to podszewka w środku, jest wykonana z niezbyt dobrego materiału။ Natomiast sama torebka jest ekstra, wielkośćteżświetna, bo mieści wszystkie najważniejsze rzeczy ။ Jak najbardziej polecam!
ကျယ် ၀ န်းသောအိတ်၊ အတွင်းပိုင်းမှာဇစ်ပါရှိပါတယ်။ ပျောက်ဆုံးနေသောတစ်ခုတည်းသောအရာသည်အပေါ်ဘက်ရှိခလုတ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မပိတ်နိုင်ပါ။ စူပါရှည်လျားသောပေးပို့မှုအတွက်ကျွန်ုပ်ကြယ်တစ်စင်းကိုချွတ်လိုက်သည်။ အားလုံးပေးပို့ရက်စွဲများထွက်ဖြစ်ကြသည်။ perfectlyုံထုပ်ပိုး